Wzọ 9 iji gbochie nrụrụ PST faịlụ - DataNumen
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Wzọ 9 iji gbochie nrụrụ aka faịlụ PST
Wzọ 9 iji gbochie nrụrụ aka faịlụ PST
Outlook PST faịlụ na-adịkarị ure. Enwere ụzọ ọ bụla iji gbochie nke a? Azịza ya bụ EE! N'okpuru ebe m depụtara 8 most ụzọ dị mkpa iji gbochie faịlụ PST gị na nrụrụ aka ma ọ bụ mmebi:
Edoziela faịlụ PST gị. Agbanyeghị na Outlook 2003/2007 na - akwado faịlị PST dịka 20GB. Na Outlook 2010 na-akwado 50GB, ọ ka na-atụ aro ka faịlụ PST gị agaghị ebu karịa 10GB, n'ihi na:
Most arụmọrụ na nnukwu faịlụ PST dị nwayọ nwayọ
Nnukwu faịlụ nwere ike bụrụ ihe rụrụ arụ.
Ọ bụ ezie na enwere ike idozi obere nrụrụ aka site na Outlook ma ọ bụ scanpst, ọ bụrụ na faịlụ PST buru ibu, mgbe ahụ usoro mmezi ahụ ga-ewe oge.
Outlook 2003-2010 na-akwado imeghe ọtụtụ faịlụ PST ọnụ na ngalaba aka ekpe. Ya mere, a na-atụ aro ya ka ịkwaga ozi ịntanetị gị n'ọtụtụ faịlụ PST dị iche iche na iwu Outlook, iji belata nha faịlụ PST ọ bụla.
Ekwela ka gị ochie-format PST faịlụ obibia 2GB. Microsoft Outlook 2002 na nsụgharị ndị mbụ na-amachi nha nke faịlụ Personal Folders (PST) na 2GB. Mgbe ọ bụla oke faili PST dị nso na 2GB, ị ga-ezute nsogbu ndị na-agbanwe agbanwe na faịlụ PST na-enwe nrụrụ aka. Ya mere, jide n'aka na faịlụ PST ochie gị dị obere 1.5GB bụ ezigbo omume.
Emela ihe na nnukwu ozi ịntanetị. Microsoft Outlook ga - emechi ma ọ bụrụ na ị rụọ ọtụtụ email n’otu oge. Na mgbe ndị nwụrụ anwụ-mkpọchi, ị ga-emechi-ala Outlook abnormally nke ga-yikarịrị ka PST faịlụ ire ure. Oke ahụmahụ bụ 10,000 ozi ịntanetị. Ya mere, mgbe ị na-achọ ịhọrọ, ịga, detuo ma ọ bụ hichapụ ihe karịrị email 10,000, arụkwala ha n'otu ogbe. Kama, rụọ ọrụ na most 1,000 ozi ịntanetị na oge, ikwugharị ọrụ ruo mgbe niile ozi ịntanetị na-esichara.
Echekwala faịlụ PST gị na ntanetị ma ọ bụ ihe nkesa. Ezubere PST faịlụ iji chekwaa kọmputa dị na mpaghara. Adịghị echekwa ya na draịvụ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ nkesa ebe ọ bụ na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ enweghị ike ịkwado ohere dị ukwuu nke faịlụ PST ma mee ka nrụrụ PST na-emebi kwa mgbe. Nakwala Ekekọrịta faịlụ PST na netwọkụ ahụ ma ghara ikwe ka ọtụtụ ndị ọrụ nweta otu otu faịlụ PST site na netwọkụ n'otu oge, nke nwere ike ibute nrụrụ aka.
Emechila Outlook mgbe ọ ka na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ị mechie Outlook n'ụzọ na-adịghị ahụkebe mgbe ọ ka na-agba ọsọ, mgbe ahụ faịlụ PST na-enweta site na Outlook n'oge ahụ ga-emerụ ngwa ngwa. Ya mere, ị kwesịrị DỊGHỊ mechie Outlook na ezighi ezi na njikwa ọrụ. Mgbe ụfọdụ mgbe ị mechiri Outlook, ọ ka ga na-arụ ọrụ n'okirikiri, ịhazi ụfọdụ ọrụ, dịka izipu / nata ozi ịntanetị. N'ọnọdụ dị otú ahụ, mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịhụ obere akara ngosi Outlook na sistemụ sistemụ. Agbanyeghị, ụzọ kachasị mma iji chọpụta ma Outlook ọ ka na-agba ọsọ bụ start “Task Manager” ma lelee ma “NTUTP.R. ỌRE” dị na “Usoro” ndepụta (Depụta ndepụta iji nyere gị aka ịchọta ya ngwa ngwa.). Mgbe ụfọdụ ị ga - ahụ Outlook na - echekwa ihe ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụkarị n'ihi na Outlook na-anwa izipu / nata ozi ịntanetị site na netwọkụ na netwọkụ gị anaghị arụ ọrụ nke ọma, yabụ Outlook kwesịrị ichere ma ọ bụ mgbe nkwụsị gachara. N'ọnọdụ dị otú a, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka njedebe nke Outlook dị ngwa, mgbe ahụ ị nwere ike iwepu njikọ netwọk nke Outlook na-eji aka ya. Mgbe nke ahụ mechara, na Outlook njikọ ga-adịghị anya na-aga na ọ ga-abort na ndabere aga-eme na ụzọ ọpụpụ anya. Maka ụfọdụ ikpe ndị ọzọ, ọ bụrụ na traị Outlook ma ọ bụ Outlook na-anọru mgbe ebighị ebi, ịnwere ike ịnwale Debetart Outlook, chere ruo ọtụtụ minit, wee pụọ, ụdị usoro a nwere ike inyere Outlook aka ịpụ na sistemụ kpamkpam.
Gbalia ihu na Outlook apụla tupu imechi kọmputa gị. Dị nnọọ ka 5, ọ bụrụ na ị mechie ma ọ bụ gbadaa kọmputa gị na-enweghị ịkwụsị Outlook, faịlụ PST gị ga-emerụ emerụ. Yabụ, agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị mgbaka, gbaa mbọ hụ na anya gị apụgoro tupu emechie kọmputa gị. Ma ọ bụ i nwere ike ime obere ngwa iji lelee nke a maka gị na akpaghị aka.
Kpachara anya maka mmemme AntiVirus gị. Ọ bụrụ na faịlụ PST gị buru ibu ma nwee ọtụtụ ozi ịntanetị, usoro AntiVirus gị ga-echebe ya. Mgbe most nke arụmọrụ na ozi ịntanetị na faịlụ PST gị ga-emetụta mmemme AntiVirus gị. Ọ bụrụ na mmemme ahụ adịghị nwayọ, mgbe ahụ, arụmọrụ ga-akwụsịlata. A na-akọ na ụfọdụ mmemme AntiVirus nwere ike imebi faịlụ PST. Microsoft OneCare nwere ike ihichapụ faịlụ PST.
Kpachara anya na mgbakwunye Outlook. Ultyfọdụ na-ezighi ezi Outlook Add-Ins nwere ike ime ka nrụrụ faịlụ PST gị mebie ma ọ bụrụ na emeghị ha n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-agba ọsọ nke ọma. Ya mere, mgbe ụfọdụ ị kwesịrị iji gbanyụọ Add-Ins ma ọ bụrụ na gị PST faịlụ ego n'anya emerụ ugboro ugboro.
Weghachite faịlụ PST gị kwa izu. Ndabere bụ ụzọ kachasị mma iji gbochie ọnwụ data. Na-echekwa faịlụ PST gị oge niile ka oge ọ bụla faịlụ PST gị mebie ma enweghị ike weghachite, ị nwere ike weghachite ndabere ọhụrụ.
Ọ bụrụ na emerụ faịlụ PST gị, mgbe ahụ ọ ka nwere ike ịrụzi ma dozie ya, yana ngwaọrụ ndị a:
scanpst.exe. Akpọkwara Igbe Mbata Ngwaọrụ. Nke a bụ a free ngwá ọrụ arụnyere na gị Outlook. Ọ nwere ike idozi most nke obere njehie na nrụrụ aka na faịlụ PST gị. Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu na Ebe a.
DataNumen Outlook Repair. Ọ bụrụ na scanpst enweghị ike idozi faịlụ PST gị, ma ọ bụ enweghị ike iweghachite ozi ịntanetị ịchọrọ, mgbe ahụ ị nwere ike iji DataNumen Outlook Repair. Ọ nwere ike naputa dị ukwuu merụsịrị mebiri emebi PST faịlụ. Dị ka ogologo dị ka e nwere ihe ọ bụla Outlook data adị gị rụrụ arụ PST faịlụ, mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair nwere ike iweghachite ha ma chekwaa ha na PST faịlụ ohuru.